RentaCar Club စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ & အခြေအနေများအကြောင်းကိုပိုမိုဖတ်ပါ
ဝက်ဘ်ဆိုက် ဆိုလိုတာကဒီဝက်ဘ်ဆိုက်၊ Rentacarclub.com နှင့်အပေါငျးတို့သစာမျက်နှာများတွင်ဒါကြောင့်ပြန်ဖို့;
ကျွန်တော်//ငါတို့ ဆိုလိုတာ Rentacarclub.com ဆးကုမ္ပဏီတြင္လုပ္ကိုင္ေနေသာထုိင္း(အောက်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အရေအ 0205560010403)၊အဘယ်သူ၏မှတ်ပုံတင်ရုံးမှာ 64/70 Moo 12, Nongprue, Bang Lamung, Chon Buri.
1.1 Rentacarclub.com ထောက်ပံ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောအငှားကားကြိုတင်စာရင်းသွင်းဖို့ဖောက်သည်များ. ထို့ကြောင့်၊ဖောက်သည်တစ်ဦးသီးသန့်ဖယ်ကားတစ်စီးနှင့်အတူ Rentacarclub.com ဈာန်သည်&လက်ခံသောဝေါဟာရများ&သောအခြေအနေကိုအောက်ပါအတိုင်း.
1.2 စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအပေးသောနေရာ၊နှင့်အတူကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ၊အဖွဲ့စည်း၏(တစ်ဦးအဖြစ်ပွဲ)နှင့်သင်(အအပ္ခ်က္ကေ)နှင့်အတူကားပိုင်ရှင်များအတွက်အပေးအယူနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအတွက်စည်းရုံးရေးသင့်ရဲ့ကားကိုငှားရမ်း. ဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေကိုလျှောက်ထားဖို့အားလုံးအပေးအယူအဘို့၏ပြဌာန်းချက်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆောက်အဦများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကို. အသုံးပြုမှု၏၊အဆောက်အဦ၊သို့မဟုတ်လက်မှတ်အပေါ်မည်သည့်စာချုပ်ရမည်ဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလုံတဲ့အတည်ပြုမှု၏သင့်လက်ခံမှုဤအခြေအနေ.
အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈအား Rentacarclub.com ခွင့်ပြုပိုင်ရှင်စာရင်းကိုဖန်တီးဖို့၎င်းတို့၏မော်တော်ယာဉ်များအတွက်ရရှိနိုင်ငှားခွင့်ပြုပုဒ္မဖို့အဘို့မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာမော်တော်ယာဉ်ကနေတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်.
1.3 Rentacarclub.com ပိုင်ဆိုင်မထားဘူးဆိုေမာ္ေတာ္ကားမ်ား၊ေရႊ၊နောက်ကိုတိုက်ရိုက်အတွက်ထုတ်ဖော်ဖေါ်ပြချက်. Rentacarclub.com အဖြစ်ပြုမူပွဲ၊အအပ္ခ်က္ကေပိုင်ရှင်ခွင့်ပြုမှသူတို့ကိုဖော်ထုတ်တဲ့တိုက်ရိုက်ကိုင်တွယ်ကြားသီးအသီးအခြား.
1.4 ဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေပြောင်းလဲသွားစေခြင်းငှါအချိန်အားဖြင့် Rentacarclub.com ထို့ကြောင့်နှစ်ဦးစလုံးပုဒ္မနှင့်ပိုင်ရှင်တွေ၊အဖြစ်အခြားအသုံးပြုသူများ၊စစ်ဆေးရမည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအပေါ်စစ်ဆေးမှုများကိုစောင့်မည်သည့်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းသို့မဟုတ်အပြောင်းအလဲများကိုစည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအလျှောက်ထားခြင်းအပေါ်သက်ဆိုင်ရာပါတီ.
1.6 ဆိုဘွတ်ကင်လုပ်ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့်အလိုအပ္ခ်က္ကေမူတည်ပါတယ်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်လိမ့်မည်. အမှု၌သင်တို့အဖြစ်အအပ္ခ်က္ကေ၊လက်မခံလို့မဆို၏အစိတ်အပိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စည်းကမ်းချက်များ၊သင်ဆက်လက်မသင့်ရဲ့ဘွတ်ကင်. အားဖြင့်ဆိုဘွတ်နှင့်အတူဤဝက်ဘ်ဆိုက်၊သင်ညွှန်ပြသို့မဟုတ်အတည်ပြုသောအားဖြင့်သွားကြပြီ၊သက်ဆိုင်ရာဝေါဟာရများနှင့်သူတို့ကိုလက်ခံ. များအတွက်မည်သည့်သက်တမ်းအကြောင်းနားမလည်ကြဘူးသို့မဟုတ်ဆန္ဒရှိမှမေးမြန်းကြောင်း၊မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ် 0991212012 မဟုတ္အီးေမးလ္မွတဆင့္ support@rentacarclub.com.
1.7 ကျနော်တို့အဖြစ်၊ပွဲစား၊အကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်အအပ္ခ်က္ကေကရရှိမှုအရင်းအမြစ်ကိုမော်တော်ယာဉ်ဖြင့်အီးမေးလ်တစ်ခုဘွတ်ကင်အတည်ပြုဘောက်လျှင်အအပ္ခ်က္ကေရဲ့ပူဇော်ခဲ့သည်. အတွက်အခြေအနေ၊ဘယ်ကားအမျိုးအစားသို့မဟုတ်ကားမော်ဒယ်ဘွတ်ျကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်အတူပိုင်ရှင်များ၊ကျနော်တို့အသိပေးလိုအပ္ခ်က္ကေနှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှအခြားရွေးချယ်စရာ၊အရာဆိုရင်၊လက်ခံခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုအံ့ထည့်သွင်းအအပ္ခ်က္ကေရဲ့လက်ရှိဘောအားဖြင့်ပြုပြင်မွမ်းမံမည်ဖြစ်မှရိုက်ပိုင်ရှင်များအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစား. မလျှင်လက်ခံခဲ့သည်၊ကျနော်တို့အကိုင်ဖျက်သိမ်းဖို့အခွင့်အစဥ္အားအမ်းအပ္ခ်က္ကေရဲ့ငွေသွင်း၊ဆိုရင်ဆိုသည္.
1.8 ပါကကျေးဇူးပြု၊သင်အလိုအပ္ခ်က္ကေ၊ရှိသည်မဟုတ်လိမ့်မည်မဆိုကန်မှာကားကိုငှားရမ်း၏စျေးနှုန်းကမ်းလှမ်းမှီတိုင်အောင်သင့်ရဲ့ဘွတ်ကင်အတည်ပြုခဲ့ပြီးလိုအပ်သောငွေပေးချေမှုသိရသည်. မည်သည့်မေးခွန်းရှိပါကသင်အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီးကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ. ပါကကျေးဇူးပြုပြီးမည်သည့်စာချုပ်ထဲသို့ဝင်မည်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကအမှန်တကယ်ဘွတ်ကား၊လူအပေါင်းတို့နှင့်အစာပေးစာယူစေလွှတ်လိမ့်မည်လိပ်စာပေး၊ပင်ရှိရာတစ်တတိယပါတီသည်အမှန်တကယ်ငွေပေးချေအတွက်ငှားရမ်း.
1.9 ၊အအပ္ခ်က္ကေ၊သင့်ရဲ့ဘောက်မှကားပိုင်ရှင်အခါအကောက်ကိုယ်တော်၏ငှားရမ်းခြင်း. Rentacarclub.com မည်မဟုတ်၊တာဝန်ခံကျင်းပအောက်တွင်မည်သည့်အခြေအနေများအတွက်မည်သည့်ငြင်းပယ်ငှားရမ်းခြင်းန်ဆောင်မှုများ၊အမှု၌သင်၏ရှုံးနိမ်များပေးပိုင်ရှင်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ကားကိုငှားရမ်းတည်ပြုချက်ဘောက်မှာအချိန်တက်ခူး.
1.10 Rentacarclub.com မဝံမည်သည့်တာဝန်များအတွက်မည်သည့်စွဲချက်မြှုတ်ကြောင့်စာရွက်စာတမ်းများလက်မှတ်ရေးထိုးအပြီးလက်ခံမှာဒေသဆိုင်ရာအဆင့်. မဆိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမှဖြစ်ပေါ်လာသောအငှားယာဉ်ဖြင့်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာကားမောင်းအရက်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၊လမ္းၾကကားမောင်းသို့မဟုတ်ပေါ့ပေါ့ဆဆမောင်းနှင်မှု၊Rentacarclub.com မဖြစ်သင့်တာဝန်ပါ. သင်အဖြစ်၊ကားအပ္ခ်က္ကေ၊ယူလိမ့်မည်ဟုအပြည့်အဝတာဝန်ယူမှုကိုရိုသေလေးစားမှုမှာထိုကဲ့သို့သောတောင်းဆိုမှုများသို့မဟုတ်အခြေအနေ.
1.11 ပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားဖို့သေချာစေရန်တိကျမှန်ကန်သတင်းအချက်အလက်ပေါ်မှာဤ၊ကျနော်တို့မျှမကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်စပ်နေသောအဖွဲ့များ၊သို့မဟုတ်အခြားသူများနိုင်တာဝန်ရှိကျင်းပခဲ့ခြင်းအားဖြင့်သင်တို့အဘို့အတိကျမှန်ကန်၏ထိုကဲ့သို့သောအချက်အလက်. ဒါဟာတစ်ခုတည်းကိုသာသင့်ရဲ့တာဝန်အကဲဖြတ်ဖို့တိကျမှန်ကန်၊ပြည့်စုံပြီးအသုံးဝင်မှုအားလုံး၏သတင်းအချက်အလက်ပေး.
2.1 မည်သူမဆို၊အဘယ်သူသည်လိုအပ်ချက်များကိုကိုက်ညီဤနေရာတွင်၎င်း၏တစ်ဦးတည်းသောသမ္မာသတိ၊လာစေခြင်းငှါအသုံးပြုသူတစ်ဦး၏Rentacarclub.com ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်၎င်းတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်ကို.
2.2 ပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ကြမည်အသုံးပြုသူများ၏Rentacarclub.com ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတင်သွင်းခြင်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့အသေးစိတ်အချက်စာရင်းတွင်၎င်းတို့၏မော်တော်ယာဉ်များအတွက်ရရှိနိုင်ပးရန္အတွင်း. သုံးန်ဆောင်မှုများ၏ပိုင်ရှင်အားဖြင့်မည်ဖြစ်ရာ၎င်းတို့အတည်ပြုကြောင်း၎င်းတို့၏မော်တော်ယာဉ်ကိုဖြည့်ဆည်းကားလိုအပ်ချက်များကို.
2.3 ပုဒ္မဖြစ်ကြမည်အသုံးပြုသူများ၏Rentacarclub.com ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအားဖြင့်တင်သွင်းသည့်လျှောက်လွှာပုံစံပေးသူတို့ရဲ့အသေးစိတ်ဖော်ပြ၍မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာ. အသုံးပြုခြင်း၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအားဖြင့်အလိုအပ္ခ်က္ကေမည်ဖြစ်ရာ၎င်းတို့အတည်ပြုမှုအကြောင်းအချက်များအဖြစ်.
2.4 Rentacarclub.com အစဉ်အမြဲစောင့်ရှောက်ဖို့အခွင့်ငြင်းဆိုပလီကေးရှင်း၏နှစ်ဦးစလုံးပိုင်ရှင်သို့မဟုတ်ပုဒ္မပေါ်သူတို့၏တစ်ဦးတည်းသောသမ္မာသတိ.
2.5 တာနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အသံုးျပဳသူမ်ားကိုသက်ဆိုင်ရာပါတီစောင့်ရှောက်ရကြမည်သူတို့ရဲ့အသေးစိတ်အထိ. မည်သည့်အချက်အလက်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းအားဖြင့်အသုံးပြုသူများအဖြစ်တိကျမှန်ကန်နှင့်အမှန်၊မည်သည့်အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်ဖြစ်ရမည်.
ငွေပေးချေမှုအတွက်မော်ဒယ် unchangeable နှင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲ၍မရအားဖြင့်အလိုအပ္ခ်က္ကေနှင့်/သို့မဟုတ်ပိုင်ရှင်ကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်. အအပ္ခ်က္ကေလိမ့်မည်အကြောင်းကြား၏အဆိုတို့တွင်ငွေပေးချေမှုရမည့်ကြိုတင်အားဖြည့်အပိုဝန္စည္ခ. ဘယ်မှာသက်ဆိုင်သောအအပ္ခ်က္ကေတာဝန်ရှိသည်များအတွက်ပေးဆောင်ချိန်ခွင်လျှာဟပိုင်ရှင်.
3.1.2 မှာအားလုံးအဆပုဒ္မတာဝန်ရှိသည်ငွေပေးချေမှု၏မည်သည့်အပိုဆောင်းန်ဆောင်မှုအားဖြင့်မေတ္တာနှင့်သူတို့အတွက်တာဝန်ရှိအခြားမည်သည့်ဝန်ဆောင်လျှောက်ထားပိုင်ရှင်အားဖြင့်. ပုဒ္မသုံးရမည်အကြွေးမှတစ်ဘွတ်ကင်လုပ်အားဖြင့် Rentacarclub.com.
3.1.3 လျှင်အအပ္ခ်က္ကေလိုအပ်မည်သည့်အလုပ္ပဲမိမိတို့ကိဳ၊Rentacarclub.com ရမယ်လက်ခံရရှိဆက်သွယ်ရေးမှတဆင့်အောက်ပါအီးမေးလ် support@rentacarclub.com သို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်အပံ့ပုံစံ၊ရှင်းလင်းစွာအသိပေး Rentacarclub.com ၏တိကျသောအသေးစိတ်အချက်၏ထိုကဲ့သို့သောအပြောင်းအလဲတချို့. Rentacarclub.com အာမခံမပေးပါဘူးသူကပြောပါတယ်လုပ္ပဲပြုပြင်နိုင်ပါသည်;သို့သော်ရှိသမျှကြိုးစားအားထုတ်မှုစေပါလိမ့်မည်တွေ့ဆုံရန်နှင့်အတူလျောက်ပတ်သောရလဒ်. ငယ္အေျမလုပ်ငန်းများပြီးအဆိုပါမော်တော်ယာဉ်ရဲ့စတက်ခူး.
3.1.4 Rentacarclub.com သည်ပူဇော်အအပ္ခ်က္ကေအမ်းပါကသူတို့ဆုံးင်းတို့၏ငှားရမ်းခအစောပိုင်း.
3.1.5 အပျက်အတွက်အအပ္ခ်က္ကေလိုအပ်သည်တိုးချဲ့ဖို့အငှားပြီးနောက်ကာလအတွက်ငှားရမ်းထားသောယာဉ်၏အမှု၌လက်ခံ၏တိုးချဲ့ပိုင်ရှင်အားဖြင့်၊အလိုအပ္ခ်က္ကေပေးဆောင်ရပါမည်တစ်ဦးအပိုဆောင်းကြေး၊အားဖြင့်ဆုံးဖြတ် Rentacarclub.com.
3.1.8 အအပ္ခ်က္ကေရမယ်၊ပစ္စုပ္ပန်အပေါ်စုဆောင်းခြင်းများငှားရမ်းထားသောမော်တော်ယာဉ်၊တစ်ဦးအပြည့်အဝယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မှမူလအစ၏နိုင်ငံ၊တရားဝင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့်တရားဝင်ခရက်ဒစ်/ငွေကြိုပေးကဒ်အတွက်လိုအပ္ခ်က္ကေသား(ယာဉ်မောင်း). အပျက်အတွက်အရှုံးခြင်းအပြင်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ၊ပိုင်ရှင်အငြင်းဆန်နိုင်ပါသည်ပေးကား၊အဘယ်သူမျှမရန်ပုံငွေပေးဆောင်လိမ့်မည် reimbursed ထိုကဲ့သို့သောအပ္ခ်က္ကေ.
3.1.9 လျှင်အအပ္ခ်က္ကေကိုဘွတ်ကင်ဒါပေမယ့်မစုဆောင်းကား၊အဘယ်သူမျှမရန်ပုံငွေပေးဆောင်လိမ့်မည် reimbursed. အကြံပြုခံရကျေးဇူးပြုသောအဖြစ်အပျက်အတွက်၏တစ်ဦးနှောင့်နှေးဆိုက်ရောက်သည်အအပ္ခ်က္ကေရဲ့တာဝန်မှဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်.
3.1.10 အကယ်၍ သင့်အား ငှားရမ်းသူအနေဖြင့် ပိုင်ရှင်မှ ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းကို လက်ခံထားသော်လည်း သင့်ကားလာယူချိန်တွင် ပိုင်ရှင်က သင့်အား အခြားအခြားသော အခြားအစားထိုးကားတစ်စီးအား ပေးဆောင်ရန် တောင်းဆိုသည် သို့မဟုတ် သင့်အား ပေးဆောင်ရန် ငြင်းဆိုထားခြင်း၊ မူလကြိုတင်မှာယူထားသောကား။ အဆိုပါပြဿနာကို သင်၊ ငှားရမ်းသူ၊ ပိုင်ရှင်နှင့် တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် လာယူသည့်နေရာရှိ ပိုင်ရှင်၏ဝန်ထမ်းများနှင့် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်ပါသည်။ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်အကြား ပြဿနာများကို ပြေလည်အောင် မဖြေရှင်းနိုင်သင့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၊ Rentacarclub.com သည် အငြင်းပွားမှုနှင့် တိုင်ကြားချက်များကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် ကားပိုင်ရှင်နှင့် ဆက်သွယ်ရန်အတွက် တာဝန်ရှိပါမည်။ ဥပမာ။ ရွေးချယ်ထားသောကားကို ပံ့ပိုးပေးရန် ပျက်ကွက်ခြင်း၊ ကားပိုင်ရှင်၏ ရောက်ရှိလာမှု နှောင့်နှေးခြင်း၊ ပြန်အမ်းခြင်းနှင့် ပယ်ဖျက်ခြင်းများ။
3.1.11 Rentacarclub.com သာကားအငှားဝန်ဆောင်မှုမှူး၊အဖြစ်ပြုမူသောအကျိုးဆောင်များအကြား၊အအပ္ခ်က္ကေ၊နှင့်ပိုင်ရှင်. ကျွန်ုပ်တို့၏န်ဆောင်မှုများအသုံးပြုသင်ကသဘောတူလက်ခံကြောင်း Rentacarclub.com မဆိုဘို့ကတာဝန်မပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၊အပိုစွဲချက်သို့မဟုတ်ကုန်ကျစရိတ်ထက်အခြား၊ကိုအငှားစရိတ်၊ဖြစ်ပေါ်သောမည်သည့်ပုံစံ၌ဖြစ်စေ၊သင်တို့အနားမှာသို့မဟုတ်ပိုင်ရှင်.
3.1.12 အခြေအနေများတွင်၊အဘယ် Rentacarclub.com တာဝန်ရှိအဘို့အဆိုငွေပြန်အမ်း၊ပေးရန်တာဝန်များ၏ပြန်အမ်းတဲ့ငွေပမာဏအားဖြင့် Rentacarclub.com သာတက်ဖို့အသိုက်လုပ်အားဖြင့်၊သင်အလိုအပ္ခ်က္ကေ၊အွန်လိုင်းမှာအချိန်၏.
3.2.1 အခါသင့်ရဲ့ဘွတ်ကင်အတည်ပြု၊Rentacarclub.com မည်ကိစ္စကိုဘွတ်ကင်အတည်ပြုချက်အပေါ်ပိုင်ရှင်၏ကိုယ်စားအဘို့အသီးအသီးကိဳ၊ဆောင်ရွက်ရန်ထည့်သွင်းရန်စွဲချက်များအတွက်အပိုဆောင်းန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်အသေးစိတ်အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကိုအခကြေးငွေကောက်ခံသို့မဟုတ်အခွန်အပေးရပိုင်ရှင်အားဖြင့်သို့မဟုတ်အပိုဆောင်းန်ဆောင်မှုအားဖြင့်မေတ္တာသင်မှာစုဆောင်း.
3.2.2 Rentacarclub.com အကြံပြုထားကြောင်းသင်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်စစ်ဆေးအသေးစိတ်ကိုဘွတ်(ဥပမာ-တည်နေရာနှင့်ငှားရမ်းကာလ). ရှိပါတယ်လျှင်မည်သည့်ကွာဟခ်က္ျခင္းပိုဆက်သွယ်ရေးမှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပုံစံသို့မဟုတ်အောက်ပါအီးမေးလ် support@rentacarclub.com၊ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအသိပေး Rentacarclub.com အတိအကျအသေးစိတ်အချက်အပားျ.
3.2.3 Rentacarclub.com အကြံပေးသင်ဖတ်နှင့်အညီလိုက်နာနှင့်အတူပိုင်ရှင်၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေ(သောရရှိနိုင်၊ဒါပေမယ့်အမည်ပြောင်းလဲပိုင်ရှင်အားဖြင့်အချိန်)အရာပေါ်မှာပိုင်ရှင်ကိုအခုနှစ်မော်တော်ယာဉ်သငျသညျမှရရှိနိုင်အများလက်ခံရရှိအပေါ်သို့ဘွတ်ကင်အတည်ပြု.
3.3.1 သင်ဆန္ဒရှိလျှင်ဖျက်သိမ်းရန်ကိဳ၊သာလက်ခံနည်းလမ်းကိုမှတဆင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်. မပယ်ဖျက်သင့်ဘွတ်ပိုင်ရှင်နှင့်အတူတိုက်ရိုက်အဖြစ်အပိုဆောင်းအခကြေးငွေ.
3.3.2 ရှိရာ Rentacarclub.com အားလက်ခံတွေ့ဆုံဖျက်သိမ်းသတိထားမိတွင်းလေးဆယ်ရှစ်(48)နာရီအစြဲအခါကားကိုငှားရမ်းခဲ့ဘွတ်၊အားလုံးရန်ပုံငွေများနုတ် 10%ပေးထားသောနေရာဖြစ်ရလိမ့်မည် reimbursed. အဘယ်သူမျှမပြန်အမ်းငွေကိုဖန်ဆင်းပြီးနောက်(48)နာရီမတိုင်မီရက်စွဲအခါကားကိုငှားရမ်းခဲ့ဖြစ်ပါ.
3.3.4 အပျက်အတွက်ဖျက်သိမ်းသို့မဟုတ်အာင္ႀကိဳ Rentacarclub.com အတွက်တာဝန်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်မည်သည့်ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုခံစားခဲ့ရအားဖြင့်သင်၏ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်အပြောင်းအလဲအတွက်ငွေကြေးလဲလှယ်မှုနှုန်းအကြားအချိန်၏မူလၾကိဳနှင့်၎င်း၏နောက်ဆက်တွဲဖျက်သိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ရေး(သက္ဆိုင္ရာ).
3.3.6 Rentacarclub.com စေခြင်းငှါ၊၎င်း၏တစ်ဦးတည်းကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်၊ပယ်ဖျက်အပိုဝန္စည္ခအအပ္ခ်က္ကေအမ်း(အတွက်လျှော့ချအန္တရာယ်တစ်ခုပမာဏ၏အုပ်ချုပ်ရေးကြေး)အတွက်အောက်ပါကိစ္စများ:
3.4.1 Rentacarclub.com စေသည်အားလုံးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုဈေးနှုန်းကိုးကားဘွတ်ကင်၏အချိန်မှာဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အလုပ်မှာအားလုံးပစ္စည်း. မည်သို့ပင်ဆိုစေ Rentacarclub.com ကိုပြင်ဆင်ရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်စျေးနှုန်းကိုးကားအချိန်တွင်အဆိုပါဘွတ်ကင်လုပ်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်အထင်ရှားသို့မဟုတ်ငုပ်လျှိုးအမှားအတွက်စျေးနှုန်းကိုးကား..
3.4.2 Rentacarclub.com မည်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအကြောင်းကြားရန်အအပ္ခ်က္ကေတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးအဖြစ်အပျက်အတွက်စျေးနှုန်းကိုးကားဖို့အချိန်ဘောသည်မမှန်ကန်.
3.4.4 နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းအားဖြင့်အသုံးပြုကြသည် Rentacarclub.com ပြဈေးနှုန်းများအတွက်ငွေကြေးအားဖြင့်ရွေးချယ်အသုံးပြုဖို့၊နှင့်ရေးသားမကြာခဏ. အဆိုပါနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုအသုံးပြုအားဖြင့်သင့်ရဲ့အကြွေး/ငွေကြိုပေးကဒ်ကုမ္ပဏီအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်ပါသည်. Rentacarclub.com တာဝန်ရှိကျင်းပခဲ့မရနိုင်ပါကိုအကြားစျေးနှုန်းအားဖြင့်ပြသ Rentacarclub.com ပမာဏအပေါ်တရားစွဲဆိုခြင်းအားဖြင့်သင်၏အကြွေး/ငွေကြိုပေးကဒ်ကုမ္ပဏီအကြောင့်ကိုလဲလှယ်နှုန်းအသုံးပြု.
3.4.5 ပိုင်ရှင်အမည်တစ်ခုခုကိုရွေးချယ်အကြံပြုငှားစျေးနှုန်းသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်. Rentacarclub.com ဖန္တီး ငှားစျေးနှုန်းအကြံပြုသည်၏စုစုပေါင်းစျေးနှုန်းကားကခွဲခြား 1000 တစ်နေ့လျှင်. ပိုင်ရှင်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စျေးနှုန်းမရနိုငျထက်လျော့နည်းအကြံပြု.
4.1 အငှားကာလ၏ကာလအတွင်းသီးသန့်၏ညာဘက်အပ္ခ်က္ကေကိုအသုံးပြု. အငှားကာလသည်ရွေးကောက်အားဖြင့်အလိုအပ္ခ်က္ကေလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းဘွတ်ကင်၏. မည်သည့်အပြောင်းအလဲသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲမှုအငှားကာလအပြုရပါမည်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်ပုံစံအောက်မှအခြေအနေပေးနေရာ.
4.2 လုံးကာလအားဖြင့်တွက်ချက်နေကြသည်. အမှု၌ဘွတ်ကင်၏အမော်တော်ယာဉ်များအတွက်ထက်နည်းသော 24 နာရီအအပ္ခ်က္ကေတရားစွဲဆိုလိမ့်မည် 24 နာရီ.
4.3 ရင်အငှားကာလထက်ကျော်လွန်ရက် 20၊နှစ်ဦးစလုံး Rentacarclub.com ထိုအခါပိုင်ရှင်ကတည်အမှန်ကိုစစ်ဆေးယာဉ်ကိုအခါအားလျော်စွာနှင့်ရပ်တန့်ရန်ဖောက်အတွက်သုံးလျှင်၊မည်သည့်.
4.4 အားလုံးအငှားကာလ extensions ဖြစ်ရမည်ပြုသောအားဖြင့် Rentacarclub.com အကိုချိုးဖောက်ရင်အဲ့ဒီဘာသာရပ်ဖြစ်စေခြင်းငှါဖို့ဘဏ္ဍာရေးတာဝန်နှစ်ခုစလုံး၏ပိုင်ရှင်နှင့်အအပ္ခ်က္ကေ.
5. RESONSIBILITIES ပါတီများ၏
5.1.1 ပုဒ္မတာဝန်ရှိသည်ည့္စုံျငှားရမ်းထားသောယာဉ်မှကြိုတင်ထွက်ခွာရာအရပ်ယာဉ်များပွင့်ကိုခူးနေကြတယ်. တခါအပ္ခ်က္ကေရွက်အငှားစက်ရုံနှင့်အတူမော်တော်ယာဉ်၊မည်သည့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေ့များ၏တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်အပ္ခ်က္ကေ.
5.1.2 ထိုအပ္ခ်က္ကေမည်မဟုတ်လည်ပတ်သောမော်တော်ယာဉ်အအပ္ခ်က္ကေတာ့သံသယမည့္စ. အအပ္ခ်က္ကေမည်သောမော်တော်ယာဉ်နှင့်သင့်လျော်သောအစီအမံဒါကြောင့်မော်တော်ယာဉ်နိုင်ဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ် towed.
5.1.3 ပုဒ္မရမယ်သာအပို့အရေအတွက်ရှိပါတယ်သောထိုင်ခုံခါးပတ်များအတွက်. အအပ္ခ်က္ကေရမည်ဖြစ်စေကြောင်းအချို့အားလုံးပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်မော်တော်ယာဉ်အဘြားပတ္မ်ား.
5.1.4 ပုဒ္မစောင့်ရှောက်ရမယ်အားလုံးအသွားအလာ. ပုဒ္မကြသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတာဝန်ရှိသည်မည်သည့်ယာဉ်အသွားအလာဗန်စေခြင်းငှါထုတ်၏ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်လည်ပတ်အဖစ္ပါတယ္.
5.1.5 ပုဒ္မယူရမယ်လျော်ကြိုတင်ကားမောင်းသည့်အခါအခြေအနေများအန္တရာယ်. (ဤသည်တို့ပါဝင်သည်၊ဒါပေမဲ့ကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်၊မြေမှုန့်၊မြူခိုးလေးလံမိုး၊ဆီးနှင်း၊သို့မဟုတ်ရေခဲအခြေအနေ). ဒီတစ်ခုတွက်ချက်မှု၏လုံလောက်သောအချိန်များအတွက်ခရီးသွားလာ.
5.1.6 ပုဒ္မယူပြီးတာဝန်ရှိသည်သင့်လျော်တဲ့အတိုင်းအလုံလုံခြုံခြုံနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကားတိုင်ကအပြန်သတ်မှတ်ထားသောတည်နေရာသို့မဟုတ်ပိုင်ရှင်ရဲ့နေရာ. ဘယ်မှာကိစ္စများတွင်အငှားယာဉ်ကိုအသုံးပြုသည်၊အလိုအပ္ခ်က္ကေတာ့အတွက်တာဝန်ရှိသည်နွန်နှင့်အတူရှိသမျှကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်စည်းမျဉ်းနှင့်အတူဆက်စပ်.
5.2.1 အားလုံးပိုင်ရှင်ဖြစ်ရမည်မှတ်ပုံတင်ထားသောအစောင့်၏. အဘယ်သူမျှမဖမ်းသို့မဟုတ်ကန့်သတ်အသုံးပြုမှုအတွက်မော်တော်ယာဉ်များခွင့်ပြုပေးပိုင်ရှင်များအားဖြင့်. နေစဉ်တွင်စာရင်းတွင်၎င်းတို့၏မော်တော်ယာဉ်များအတွက်ရရှိနိုင်၊ပိုင်ရှင်တွေကိုပေးရမညျစာရွက်စာတမ်းများကိုသက်သေအထောက်အထားသူတို့၏အိမ်ခြံမြေပိုင်ဆိုင်မှု.
5.2.3 ပိုင်ရှင်အာမခံရမည်အကြောင်းကားအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်တဲ့ရက်စွဲအပေါ်အများ၏စတင်ငှားရမ်းကာလ. ယခုအချိန်တွင်၏အပိုင်ရှင်ခွင့်ပြုရမည်အအပ္ခ်က္ကေမှစစ်ဆေးအငှားယာဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းအပါအဝင်၊ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်မမှန်၊စာခ်ဳပ္စာ၊pedals နှင့်လက်ဘရိတ်၊ပြတင်းပေါက်၊ထိုင်ခုံနှင့်ထိုင်ခုံခါးပတ်များ၊အီလက်ထရောနစ်၊၊ညွှန်ကိန်းများ၊လောင်စာဆီ၊စသည်တို့ကို. ကားရပါမည်မပေးကျွံသို့မဟုတ်ပုံမှန်မဟုတ်သော.
5.2.6 အားလုံးဟာယာဉ်၏ချို့ယွင်း(အဖြစ်ခြစ်၊ပြန်၊အချို၊စသည်တို့ကို.) မဖြစ်မနေမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းအားဖြင့်နှစ်ဦးစလုံးပိုင်ရှင်နှင့်အအပ္ခ်က္ကေတာ့ကာလအတွင်းပြောင်းရွှေ့ကြေး၏.
5.2.8 ပိုင်ရှင်ကိုအတည်ပြုရမည်အဝိသေသလက္ခဏာများ၏အအပ္ခ်က္ကေအချိန်တွင်၏. ပိုင်ရှင်တစ်မိတ္တူအပ္ခ်က္ကေရဲ့ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္. Rentacarclub.com စေခြင်းငှါမည်သည့်အချိန်တွင်တာင္း၏မိတ္တူထိုကဲ့သို့သောမာင္းလိုင္စင္. ပါကပိုင်ရှင်များကိုရန်ပျက်ကွက်သောမိတ္တူများ၏အအပ္ခ်က္ကေရဲ့ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊Rentacarclub.com စောင့်ရှောက်ဖို့အခွင့်ငြင်းဆိုငွေပေးချေမှုကိုပိုင်ရှင်.
5.2.9 ပိုင်ရှင်ပေးရမညျတစ်ဦးတတိယပါတီပေးရန်တာဝန်အာမခံအများအားမော်တော်ယာဉ်စာရင်းများအတွက်ရရှိနိုင်. လျှင်မေတ္တာအားဖြင့် Rentacarclub.com ပိုင်ရှင်မည်ပေးလျော်သက်သေအထောက်အထားသက်သေပြဖို့.
ထို့အပြင်အပိုဒ်5လုံး၏အသုံးပြုသူများအများမှာတာဝန်ရှိလိုက်နာရန်အောက်ပါစည်းကမ်း.
6.1.3 အသုံးပြုသို့မဟုတ်အဘယ်အချက်အလက်၊ရုပ်ပုံသို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းအရာဖြစ်ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၏Rentacarclub.com သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်တတိယပါတီဥပဒေဖြင့်ကာကွယ်;
6.1.6 သုံးဝန်ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေရန်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များ၏ပိုင်ရှင်သို့မဟုတ်ပုဒ္မနိုင်ရန်အတွက်ကောက်ချက်ချတိုက်ရိုက်ကိုင်တွယ်နှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာပါတီပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲ Rentacarclub.com ဖန္တီး ကော်မရှင်;
6.1.12 သုံးဝန်ဆောင်မှုများကိုကြော်ငြာရန်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဝန်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်အခြားသူများအဖြစ်ယုံကြည်လျှင်သူတို့၏ကိုယ်စားလှယ် Rentacarclub.com သို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ဝန်ဆောင်မှုများ၏နေစဉ်၊သူတို့ကြသည်မဟုတ်;
6.1.14 နှင့်အတူရောက်စွက်စစ်ဆင်ရေး၏အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်ကို(အပါအဝင်မည်သည့်လင့်ခ်တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ဗိုင်းရပ်စ်၊ဘော့က၊စတာတွေ). သို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အကောင့်အချက်အလက်;
7.1 နေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့၏န်ဆောင်မှုများအသုံးပြုအလိုအပ္ခ်က္ကေပေးဆောင်ရမည်ကိုအောက်ပါအခကြေးငွေနှင့် Rentacarclub.com မူမည်သည့်ငွေပေးချေမှုအပေါ်ပိုင်ရှင်၏ကိုယ်စားအဖြစ်မိမိတို့၏အခွင့်အာဏာအေးဂျင့်:
7.2.6 Locksmith တာဝန်ခံ(အတွက်လိုအပ်၏အမှု);
7.3 ပမာဏ၏မည်သည့်အပိုဆောင်းတာဝန်ခံများအတွက်သတ်မှတ်ထားပိုင်း 22.
7.4 အအပ္ခ်က္ကေလည်းငွေကြေးမည်သည့်ပြည်နယ်သို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာပြစ်ဒဏ်လျှောက်ထားရန်အဆိုပါပိုင်ရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မလျော်ကန်သောအသုံးပြုမှုများ၏မော်တော်ယာဉ်ဖြင့်အလိုအပ္ခ်က္ကေ. ထိုကဲ့သို့သောငွေပေးသွင်းနိုင်ပါသည်အလိုအလျှောက်အားဖြင့်တရားစွဲဆို Rentacarclub.com အအပ္ခ်က္ကေရဲ့အကောင့်ကိုနှင့်/သို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်/ငွေကြိုပေးကဒ်.
7.6 မီငှားရမ်းခကာလ Rentacarclub.com အားသွင်းပါလိမ့်မယ်အလုံခြုံရေးအသိုက်အအပ္ခ်က္ကေရဲ့အကြွေး/ငွေကြိုပေးကဒ်ကိုအာမခံနိုင်ရန်အတွက်အအပ္ခ်က္ကေရဲ့လျော်ကြေးများ၏ဆုံးရှုံးမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အဆိုပါမော်တော်ယာဉ်ရဲ့အသုံးပြုရန်. အမှုအတွက်အပြန်အမော်တော်ယာဉ်အတွက်သင့်လျော်သောအခြေအနေနှင့်အတူလိုက်နာမှုအတွက်ဤသတ်မှတ်သည်၊ရှိပါတယ်လျှင်အဘယ်သူမျှမတိုင်ကြားမှပိုင်ရှင်၊လုံခြုံရေးအသိုက်အမည်မှပြန်လာသင်၏အကြွေး/ငွေကြိုပေးကဒ်အတွင်း(5)စီး၏နေ့စွဲကနေရက်ပတ်လုံး၏အဆုံးငှားရမ်းကာလ.
7.9 အားဖြင့်ဤအအပ္ခ်က္ကေ irrevocably၊အပြည့်အဝနှင့်အမြဲတမ်း authorises Rentacarclub.com အခကြေးငွေကောက်ခံရန်မည်သည့်ငွေပမာဏသည်နှင့်အညီဤသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွအအပ္ခ်က္ကေရဲ့အကြွေး/ငွေကြိုပေးကဒ်၊ချိတ်ဆက်ထားတဲ့လိုအပ္ခ်က္ကေရဲ့အကောင့်ကို. အမှုအတွက်စုဆောင်း၏မည်သည့်ငွေကြေးပမာဏအနေဖြင့်အပ္ခ်က္ကေရဲ့အကြွေး/ငွေကြိုပေးကဒ် Rentacarclub.com အကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်အပ္ခ်က္ကေကြောင်းထိုကဲ့သို့သောစုနှစ်(2)စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပတ်လုံးကြိုတင်ရက်စွဲမှစုဆောင်း. ဤကာလအတွင်းအအပ္ခ်က္ကေခွင့်အယူခံဝင်နှင့်စိန်ခေါ်မှုထိုကဲ့သို့သောစုဆောင်းပေးလုံလောက်မျှတ.
8.1 အပြင်ပုဒ်မ7အအပ္ခ်က္ကေခံရကြလိမ့်မည်လည်းအများအတွက်တာဝန်ရှိအောက်ပါဒဏ်ငွေနှင့်စွဲချက်ထသောကာလအတွင်းငှားရမ်းခကာလ:
8.2 အအပ္ခ်က္ကေရဲ့တစ်ဦးတည်းသောတာဝန်ပေးဆောင်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်ဒဏ်မှတိုက်ရိုက်ထိခိုက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမဟုတ်လျှင်အခြားသတ်မှတ်သောနေရာသို့မဟုတ်သာ. ပြန်မီယာဥ္အအပ္ခ်က္ကေကြားရမည်ကိုပိုင်ရှင်အကြောင်းမည်သည့်ထိခိုက်စေဖို့တတိယပါတီများအသုံးပြုနေစဉ်မော်တော်ယာဉ်နှင့်မည်သည့်ပြစ်ဒဏ်မှဆက်စပ်.
8.3 အမှုအတွက်လက်ခံရရှိမည်သည့်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်မှတာဝန်ရှိပြည်နယ်အလောင်းတွေနှင့်ပတ်သက်ကား၊နှစ်ဦးစလုံးပိုင်ရှင်နှင့် Rentacarclub.com ခွင့်ရှိသည်ဖို့အလွန်အသေးစိတ်အအပ္ခ်က္ကေထိုကဲ့သို့သောခန္ဓာကိုယ်.
9.1 ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးပိုင်ရှင်တွေ authorise Rentacarclub.com စုဆောင်းဖို့မည်သည့်ငွေပေးချေမှုမှဆက်စပ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအအပ္ခ်က္ကေအညီနှင့်အတူဤဝေါဟာရများ.
9.2 Rentacarclub.com ပေးချေမည်အောက်ပါအသတ်ပမာဏမှပိုင်ရှင်:
9.4 အားလုံးငွေပေးချေမှုမှုကြောင့်ဖန်ဆင်းလိမ့်မည်ဟုဘဏ်အကောင့်ပိုင်ရှင်၏. ပိုင်ရှင်ကိုပေးရမညျ Rentacarclub.com နှင့်အတူစစ်မှန်သောနှင့်တရားဝင်ဘဏ်အသေးစိတ်. ဒါလုပ်ဖို့ပျက်ကွက်များအတွက်နှစ်ဆယ်-(21)၏နေ့စွဲကနေရက်ပတ်လုံး၏အဆုံးအငှားကာလမွအဖြစ်ပိုင်ရှင်ရဲ့ငြင်းဆန်ရရှိရန်ငွေပေးချေ.
9.6 Rentacarclub.com များအတွက်တာဝန်ရှိဖြစ်လိမ့်မည်၊မည်သည့်ဘဏ်ကော်မရှင်မဟုတ်လျှင်အခြားအများအားဖြင့်သဘောတူပိုင်ရှင်နှင့် Rentacarclub.com.
9.7 ပိုင်ရှင်ဖြစ်ရလိမ့်မည်များအတွက်တစ်ခုတည်းကိုသာတာဝန်ရေတွက်နှင့်ပေးဆောင်မည်သည့်အခွန်နှင့်ဆက်စပ်ရန်အဆိုပါရန်ပုံငွေများကိုလက်ခံရရှိကနေ Rentacarclub.com သို့မဟုတ်အခြားပါတီမှဆက်စပ်.
အာမခံေလွ်ာက္ထားေအားလုံးအအုပ်. အသုံးပြုသူများအပြန်လည်သုံးသပ်အအာမခံမူဝါဒနှင့်အကြောင်းကြားခံရကြောင်းမည်သည့်ကန့်သတ်နှင့်သီးသန့်အရာလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်. အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုသုံးစွဲသူများကိုလက်ခံမခံမူဝါဒနှင့်ဆောင်ရွက်ရန်လိုက်နာပါ.
10.2 တိုက်ပျက်ပယ်ဖျက်ရန်အဖုံးများစွဲချက်များအတွက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမှငှားရမ်းထားသောမော်တော်ယာဉ်သို့မဟုတ်၎င်း၏. အချို့ကိစ္စများတွင်အမှန်၊undercarriage၊သော့၊မှိုင်း၊အသော့အဖြစ်နှင်ထုတ်စွဲချက်ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းကြသည်မဟုတ်အဆိုပါအာမခံမူဝါဒ.
10.3 ခိုးပယ်ဖျက်လျော့နည်းစေသင့်ရဲ့ဥပဒေကြောင်းအရတာဝန်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ခိုးဝှက်သို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ကြိုးစားခဲ့ခိုးယူသို့မဟုတ်ခိုးယူ၏. မည်သည့်အမျိုးပေါ့ဆမှုနှင့်အတူဆက်စပ်အခိုးအငှားယာဉ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်မှာကားပိုင်ရှင်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုဖြည့်စွက်ပြန်အမ်းငွေများအပြည့်အဝအ၏ကုန်ကျစရိတ်ငှားရမ်းထားသော.
10.4 အတွက်မတော်တဆမှု၏အမှုပိုင်ရှင်သို့မဟုတ်အအပ္ခ်က္ကေရမယ်ချက်ချင်းအကြောင်းကြား Rentacarclub.com
10.5 ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ချိုးဖောက်ရင်အဲ့ဒီ Rentacarclub.com မည်မဟုတ်များအတွက်တာဝန်ရှိသောမည်သည့်ဆုံးရှုံးမှုနှင့်ရှိသည်မဟုတ်လိမ့်မည်အယူအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတွင်မည်သည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်ဆက်စပ်သောကဲ့သို့သော.
10.8 အဆိုပါအာမခံမှသာတရားဝင်သည်အတွင်းငှားရမ်းကာလ. မည်သည့်ဖြစ်ရတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ၏ပြင်ပအငှားကာလကိုဖြင့်ဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်အပ္ခ်က္ကေ.
10.10 လျှင်ကားအပိုထက်ဆယ်(10)နှစ်အရွယ်သို့မဟုတ်မောင်းကျော် 100၊000 ကီလိုပိုကီအခကြေးငွေတရားစွဲဆိုလိမ့်မည်မှု၏အမှု၌မော်တော်ယာဉ်ကိုဖြိုဖျက်. ပိုလျှံအကီအခကြေးငွေပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်ပိုင်ရှင်အားဖြင့်ဆိုရင်ကားတောင်မှန်မှန်ကန်ကန်မီဖြိုဖျက်၊အအပ္ခ်က္ကေလျှင်အပျက်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ခဲ့သည်မှန်ကန်အသုံးပြုမှုများ၏မော်တော်ယာဉ်အတွင်းငှားရမ်းကာလ.
10.11.1 ၏အမှု၌အပေါက်၊အအပ္ခ်က္ကေမည်အပြည့်အဝတာဝန်ရှိသည်. နှစ်ယောက်ရှိပါတယ်ဆိုရင်စာခ်ဳပ္စာ၊အရာဖြစ်ရမည်ပြောင်းလဲ၊အအပ္ခ်က္ကေယူလွ်င္အစားထိုးများ၏တဦးတည်းဘက်ထရီနှင့် 50%အဆိုပါကုန်ကျစရိတ်၏ဒုတိယအယာ.
10.11.4 ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်အဆိုပိုလျှံသည်ဘတ္ေငြ 3000
10.11.5 တစ်ဦးပြောဆိုချက်ကိုအောင်၏အဖြစ်အပျက်၌, သင်ငှားရမ်းသဘောတူညီချက်၏အဆုံးကနေ 24 နာရီအတွင်း support@rentacarclub.com အီးမေးလ်ပေးပို့ခြင်း, RentaCar Club မှပြဿနာကိုသတင်းပို့ဖို့ရှိသည်။ ထိုအခိုး၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ကားတစ်စီးပိုင်ရှင်တွေလည်း Viriyahs အာမခံပေါ်လစီသည်ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းခံရရန်ငှားရမ်းသဘောတူညီချက်၏အဆုံးကနေ 24 နာရီအတွင်းရဲနှင့်အတူတစ်ဦးအစီရင်ခံစာ file ရမည်ဖြစ်သည်။
11.1 ကရင္အမ်ဳိးသားအဆို၏အစိတ်အပိုင်းဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏န်ဆောင်မှုများအသုံးပြု၊သငျသညျသဘောတူရန်သဘောတူကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်အတူကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ. အဆိုပါသီးသန့်လုံခြုံရေးမူဝါဒ၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအအုပ်ချုပ်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အသုံးပြုမှုကိုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကို. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖတ်ရှုပါကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ. သင်သည်မကျင့်လျှင်သဘောတူနှင့်အတူမည်သည့်အစိတ်အပိုင်းများ၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ၊မသုံးကြဘူးကျေးဇူးပြုပြီးအဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှု.
11.3 အောက်ပါအလက်စုဆောင်းကောက်ယူစေခြင်းငှါ၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်:နာမည်မွေးဖွားရက်စွဲ;က်ား;စီးပွားရေးလုပ်ငန်း/ကုမ္ပဏီအမည်;အလုပ်အကိုင်ခေါင်းစဉ်;အလုပ်အကိုင်;ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်ထိုကဲ့သို့သောအီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ;လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေအဖြစ်ပို့စ်ကိုကုဒ်များ၊ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုနှင့်အကျိုးစီးပွား;ဘဏ္ဍာရေးအချက်အလက်တွေအဖြစ်ခရက်ဒစ်/ငွေကြိုပေးကဒ်နံပါတ်များ;IP လိပ်စာ(အလျောက်စုဆောင်းထားသော);ဝက္ဘ္ဘေရာက္ဇာအမျိုးအစားနှင့်ဗားရှင်း(အလျောက်စုဆောင်းထားသော);လည်ပတ်ရေးစနစ်(အလျောက်စုဆောင်းထားသော);စာရင်းတစ်ခု၏နှင့်အတူစတင်ရည်ညွှန်းဆိုက်၊သင့်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုအပေါ်ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ နှင့်ဆိုက်ကားရန်(အလိုအလျှောက်စုဆောင်းထားသော).
12.1 ယေဘုယျအားဖြင့်အနိမ့်ဆုံးအသက်အရွယ်ကန့်သတ်အတြက္ကားဌားဖြစ်ပါသည် 21 အသက်အနှစ်. စိန္ေမကျော်လွန် 65 သက်အရွယ်အနှစ်. များအတွက်မည်သည့်အပိုဆောင်းတာဝန်ခံမှု၏အမှု၌ယိမ်းအတွက်အသက်အရွယ်ကန့်သတ်သို့မဟုတ်အပြောင်းအလဲအတွက်ကားငှားရမ်းခြင်းအသက်အရွယ်ပေါ်လစီ၊စိတ်ပါဝင်စား၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအဆိုပါမော်တော်ယာဉ်ရဲ့ပိုင်ရှင်. အဆိုလာဒ္ႏပတ်သက်သက်အရွယ်လိုအပ်ချက်များကိုခဏငွားတဲ့ကား၊ေက်းဇူးျပဳ၍ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းအဖြစ်ကောင်းစွာ.
13.1 ကလေးထိုင်ခုံ၊မိုးထိန်နှင့်အပိုပစ္စည်းများထောက်ပံ့ပေးစေခြင်းငှါပိုင်ရှင်အားဖြင့်ပေါ်အောင်တောင်းဆို. ကလေးထိုင်ခုံအဘို့ obligatory ပုဒ္မယာဉ်မောင်းနှင့်အတူအသေးစားအလတ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး. မှတ်စုတစ်ခုလုပ်ပါနောက်ဘက်ထိုင်ခုံခါးပတ်များမဖြစ်စေခြင်းငှါ၊ထောက်ပံ့အားလုံးအတွက်. ထိုကဲ့သို့သောသင်တောင်းဆိုရမည်ဆက်သွယ်ကားရဲ့ပိုင်ရှင်ကခင်ငှားရမ်းကာလ.
14.1 တိုင်းအသံုးျပဳသူမ်ားဆိုင်းစေခြင်း၊မိမိတို့အသင်းမှာမည်သည့်အချိန်ပေးခြင်းအားဖြင့် Rentacarclub.com အရေးအမိန့်ကြော်ငြာစာ.
14.3 ဘာသာရပ်အသုံးပြုသူများမှ'အမှန်အယူခံ၊Rentacarclub.com အခွင့်အရေးရှိသည်ဆိုင်းမဆိုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်နှင့်/သို့မဟုတ်ပိတ်ဆို့မည်သည့်အသုံးပြုသူရဲ့အကောင့်မှာမိမိတို့၏တစ်ဦးတည်းကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိပါတယ်လျှင်၊ခိုင်ခိုင်လုံလုံကြောင်းယုံကြည်ဖို့အသုံးပြုသူအချိုးအသုံးပြုမှုများအတွက်မည်သည့်နည်းလမ်း.
15.1 မာင္းဒေသများရှိရမည်သဘောတူပိုင်ရှင်နှင့်အတူ. ရန်ရည်ရွယ်လျှင်မောင်းအပြင်ဘက်မာင္းဧရိယာ၊သင်ကြားရမည် Rentacarclub.com ရယူပိုင်ရှင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်. သင်ချင်တယ်ဆိုရင်ခရီးသွားလာရန်အခြားတိုင်းပြည်များသင်ကြားပြီးကဘွတ်ကင်၏အချိန်မှာကတည်းကကူးနိုင်ငံရှိ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အခြေအနေများနှင့်ကန့်သတ်သောအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်ပါသည်. ဒေသခံစွဲချက်လျှောက်ထားစေခြင်းငှါ၊နှင့်အပိုစာရွက်စာတမ်းများစေခြင်းငှါအတွက်လိုအပ်သောခရီးသွားလာဖို့အချို့နိုင်ငံများ.
16.1 Rentacarclub.com ခွင့်ရှိပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ညဉ်းဆဲ၊ဆက်လက်ဆောင်ရွက်င့္ပင္.
16.2၏အမှု၌မဆိုချိုးဖောက်ရာ၏ဤဝေါဟာရများ Rentacarclub.com အမှန်မှာမည်သည့်အချိန်နှင့်ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ၊ဖယ်ရှားရန်သို့မဟုတ်အကောင့်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဖို့မည်သည့်အကြောင်းအရာ၏အဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ၎င်း၏တစ်ဦးတည်းကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်.
17.1 Rentacarclub.com အတွက်တာဝန်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်:
18.1 ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အတွက်မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းများ(အပါအဝင်အကြောင်းအားကစားအသုံးပြုသူများ)ဆိုင်၏ပိုင်ရှင် Rentacarclub.com –XXXXXXXXXX
18.2 သုံးဝက်ဘ်ဆိုက်၏အကယ့်အကြောင်းအရာအတွက်ရည်ရွယ်ချက်အခြားထက်ကျွန်ုပ်တို့၏န်ဆောင်မှုများအသုံးပြုပြီးမပါဘဲတစ်ဦး၏ကြိုတင်ရေးသားထားသောသဘောတူ XXXXXXXXXX တင်းကြပ်စွာတားမြစ်ထားသည်နှင့်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်စေခြင်းငှါအဆင္သင္.
18.4 တင်မည်သည့်ပစ္စည်းအပေါ်အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသူများပေးသူတို့မှခွင့်ပြုချက် Rentacarclub.com အသုံးပြုရန်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်း၌မည်သည့်လမ်းပေးနိုင်ရန်အတွက်သူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှု.
19.1 အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်နေရာနိုင်ပါသည်ႏချို့သောပထမဦးဆုံးကွတ်ပါတီအပေါ်အသုံးပြုသူရဲ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ဖုန်း. ကျွန်တော်တို့ကွတ်ကီးများကိုသုံးပါရန်လွယ်ကူချောမွေ့နှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်အသုံးပြုသူများအတွေ့အကြုံအဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုပေးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏န်ဆောင်မှုများတိုးတက်ကောင်းမွန်. ကျနော်တို့ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ဤကွတ်နှင့်ခြေလှမ်းတွေလှမ်းကြပြီသေချာစေရန်သင်၏ကိုယ်ရေးအချက်ကာကွယ်ထားသည်နှင့်လေးစားမှာအားလုံး.
19.2 မီကွတ်ကီးများအပေါ်ထားရှိအသုံးပြုသူရဲ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်စက်သူ/သူမကိုပြသပါလိမ့်မယ်ပေါ်လာမည္သူတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်တောင်းထားသူများ. အသုံးပြုသူများစေခြင်းငှါ၊သူတို့လိုလျှင်၊ငြင်းဝန်တင်ကွတ်;သို့သော်၊အချို့သောအင်္ဂါရပ်များ၏အဝက်ဘ်ဆိုက်အလုပ်မလုပ်သို့မဟုတ်အပြည့်အဝအဖြစ်ရည်ရွယ်.
21.1 မည်သည့်တရားဝင်အသိပေးခြင်းအားပေး Rentacarclub.com ပတ်သက်ဤသတ်မှတ်ရမည်အီးမေးလ်ဖြင့်ပေးပို့ support@rentacarclub.com သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေကြောင်းအရလိပ်စာ: RentaCar Club Company Limited 64/70 Moo 12, Nongprue, Bang Lamung, Chon Buri.
21.2 အ invalidity၊ဖျက်သိမ်းခြင်း၊unenforceability သို့မဟုတ်တရားမဝင်၏မည်သည့်ပြဋ္ဌာန်းချက်၏ဤသတ်မှတ်ရမည်မဟုတ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ invalidity၊ဖျက်သိမ်းခြင်း၊unenforceability သို့မဟုတ်တရားမဝင်သောအခြားပြဋ္ဌာန်းချက်များ. ၏အမှု၌invalidity၊ဖျက်သိမ်းခြင်း၊unenforceability သို့မဟုတ်တရားမဝင်၏မည်သည့်ပြဋ္ဌာန်းချက်၏ဤဝေါဟာရများ Rentacarclub.com အရာခပ်သိမ်းကိုပြုလိမ့်မည်ဖြစ်နိုင်အစားထိုးဖို့ထိုကဲ့သို့သောပြဋ္ဌာန်းဖြစ်စေတဲ့အနည်းဆုံးထိခိုက်မှု၏အားလုံး.
21.4 ကိုဤသတ်မှတ်ချက်များများအတွက် Rentacarclub.com'့အကျိုးပေးပါ. သို့သော်အသုံးပြုသူများအမှန်ပြဋ္ဌာန်းရန်ဆို၏ဤဝေါဟာရများအားကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ရန်အတွက်သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးဥပဒေနှင့်အညီ.
Rentacarclub.com ဖန္တီးဆာင္ခ 20%စုစုပေါင်းပမာဏ၏အငှားစျေးနှုန်းအားဖြင့်လက်ခံရရှိသောပိုင်ရှင်.
Rentacarclub.com ဖန္တီးဆာင္ခ 10%စုစုပေါင်းငွေပမာဏအငှားစျေးနှုန်းအပေးပိုင်ရှင်အားဖြင့်.
10%စုစုပေါင်းငှားရမ်းခစျေး(သောလိပ်စာများ၏ကုန်ကျစရိတ် Rentacarclub ရဲ့အကူအညီ)10%-
ည့ Charge Variable Varies(ကုန်ကျစရိတ်အစားထိုးလောင်စာ)-All300฿
အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံ ပုံသေ 300฿ 300฿ – –
သန့်ရှင်းရေးတာဝန်ခံ ရှင် ကွဲပြားခြားနားသည်(အထိမက်စ်. 3၊000฿) – အားလုံး 300฿
အခကြေးငွေပေးအပ်ခြင်း ရှင် ကွဲပြားခြားနား – အားလုံး –
ပိုလျှံကီလိုမီတာခႏႈန္း ရှင် ကွဲပြားခြားနားသည်(10฿ႏွပိုလျှံကီလိုမီတာမောင်းနှင်) 30%အခကြေးငွေ 70%အခကြေးငွေ 300฿
ရန်အစားထိုးတာဝန်ခံ ရှင် ကွဲပြားခြားနား(အကိုရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့အမှန်တကယ်ကုန်ကျစရိတ်အစားထိုးသော့များ) – အားလုံး 300฿
နှောင်းပိုင်းတွင်အခကြေးငွေပြန်လာ ရှင် ကွဲပြားခြားနားသည်(25%၏နေ့စဉ်မှုနှုန်းတစ်နာရီလျှင်နှောင့်နှေး) 30%အခကြေးငွေ 70%အခကြေးငွေ 300฿
Locksmith တာဝန်ခံ ရှင် ကွဲပြားခြားနားသည်(အထိဆံုး 12၊000฿ခေါ်ထုတ်တာဝန်ခံ)အပေါင်းကုန်ကျစရိတ်၏ပြုပြင်ရေးများကို(ရှိပါက)၏မည်သည့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့သော locksmith အတွက်သင်တန်း၏ထွက်တင်ဆောင်လာသောဆိုအပ်လုပ်) – အားလုံး 300฿
20%အမြင့်ဆုံးနှင့်အတူ 1000฿ထက်နည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်လျှင်7ရက်ပေါင်းထက်ပို 24 နာရီအမီအငှားကာလ
20%အမြင့်ဆုံးနှင့်အတူ 2၊000฿ထက်နည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်လျှင်မီ 24 နာရီငှားရမ်းခကာလ
အားလုံး – –
ပိုင်ရှင်အမွတ္-ပြပွဲအခကြေးငွေ ရှင် 20%အမြင့်ဆုံးနှင့်အတူ 2၊000฿ထက်နည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်လျှင်မီ 24 နာရီငှားရမ်းခကာလ အားလုံး – –
ည့တာဝန်ခံ ရှင် ကွဲပြားခြား(ကုန်ကျစရိတ်အစားထိုးလောင်စာ) – အားလုံး 300฿
လိုအပ္ခ်က္ကေဖျက်သိမ်း;မီအတည်ပြု ပုံသေ အဘယ်သူမျှမအခကြေးငွေအတွက်ဘွတ်ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပိုင်ရှင်အားဖြင့် 0% 0% –
လိုအပ္ခ်က္ကေဖျက်သိမ်းခြင်း;အတည်ပြုပြီးနောက် ပုံသေ 25%စုစုပေါင်းငှားရမ်းခစ်းႏႈန္းလျှင်မီ 48 နာရီအမီအငှားနေ့စွဲနှင့်အချိန် 20% 5% –
လိုအပ္ခ်က္ကေဖျက်သိမ်းခြင်း;အတည်ပြုပြီးနောက် ပုံသေ 100%စုစုပေါင်းငှားရမ်းခစျေးနှုန်းကျော် 48 နာရီအမီအငှားနေ့စွဲနှင့်အချိန် 80% 20% –
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းအတွက်ကား Varible ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၌ဆေးကားအထိကွဲပြားခြားနား 5၊000฿ – အားလုံး 300฿
ကားတစ်စီးငှားရမ်း Chiang Mai
ကားတစ်စီးငှားရမ်း Chiang Rai
ကားတစ်စီးငှားရမ်း Chon Buri
ကားတစ်စီးငှားရမ်း Hat Yai
ကားတစ်စီးငှားရမ်း Hua Hin
ကားတစ်စီးငှားရမ်း Nakhon Pathom
ကားတစ်စီးငှားရမ်း Nakhon Si Thammarat
ကားတစ်စီးငှားရမ်း Roi Et
ကားတစ်စီးငှားရမ်း Surat Thani
ကားတစ်စီးငှားရမ်း Ubon Ratchathani
ကားတစ်စီးငှားရမ်း Udon Thani